ပျက်စီးခြင်းနှင့် ချမ်းသာခြင်း | Rev.U Min Lwin
Posted by ဦးမင်းလွင် on 04/07/2013
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	Tagged: ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္.	Leaveacomment
ထို့ကြောင့် ခဲယဉ်း ဆိုးယုတ်သော နေ့ရက် ကာလ၌ ဆီးတားနိုင့်သဖြင့် ကိစ္စ အလုံးစုံ တို့ကို ပြီးစီး၍ ခံရပ်နိုင်မည့် အကြောင်း ဘုရား သခင်ပြင်ဆင် တော်မူသော လက်နက် စုံကို ယူဆောင်ကြလော့။ …ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် တည်းဟူသော ဝိညာဉ် တော်၏ ထားကို၎င်း ယူဆောင်ကြ လော့။ (ဧ ၆း ၁၃၊ ၁၇)။
ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်သည် အသက်ရှင်ခြင်း၊ တန်ခိုးနှင့်ပြုပြင်ခြင်း၊ သန်လျက် တကာတို့ထက် ထက်ခြင်းနှင့် ပြည့်စုံသည် ဖြစ်၍ အသက်နှင့် စိတ်ဝိညာဉ် ကို၎င်း အရိုးအဆစ်နှင့် ခြင်ဆီကို၎င်း ပိုင်းခြား၍ ထုတ်ချင်း ခွင်းတတ်၏။ စိတ်နှလုံး အကြံအစည် များကို လည်း သိမြင်တတ် ၏။ (ဟေဗြဲ ၄း၁၂)။
ငါ၏ နှုတ်ကပတ် တော်သည် မီးကဲ့သို့၎င်း ကျောက်ကို ထုချေသော သံတူကဲ့သို့ ၎င်း ဖြစ်သည် မဟုတ်လောဟု ထာဝရဘုရား မေးတော် မူ၏။ (ယေ ၂၃း၂၉)။
ယုံကြည်ခြင်းကို အစအဦး စုံလင်စေသော သခင်ဘုရားကို စေ့စေ့ထောက်ရှု ဆင်ခြင် သော အခါတွင်လည်း သခင် ဘုရားသည် စာတန်၏ စုံစမ်း လှည့်ဖြားခြင်းများကို ပထမအာဒံကဲ့သို့ ကျဆင်း ဆုံးရှုံးသွားခြင်း မရှိဘဲ အောင်မြင်ခဲ့သည် မှာ ကျမ်းစာ အားဖြင့်သာ ဖြစ်ကြောင်း အထင်အ ရှားပင် ဖြစ်ပါသည်။
(ရှင်မဿဲ ၄း၁-၁၁)တွင် သခင်ဘုရားက ဤလောကတွင် နေစဉ် စာတန်၏ ပရိယာယ်များနှင့် လှည့်စား ဖြားယောင်း သွေးဆောင် ခြင်းများကို မည်ကဲ့သို့ အောင်နိုင်ကြောင်းကို သက်သေ ပြထား ပါသည်။ ဆရာကြီး ဒီအယ်မူးဒီက ‘သမ္မာကျမ်းစာ ဆိုတာ အသိတရား ရရှိရုံ သက်သက် မဟုတ်ပါ။ လက်တွေ့ နာခံလိုက်လျှောက်ဖို့ ဖြစ်သည်’ဟု အလွန် ဆီလျော်သော စကားကို ဆိုခဲ့ဖူး ပါသည်။
သခင် ဘုရားအား စာတန်မှ စုံစမ်းသွေး ဆောင်ခြင်းကို အရင်း စစ်ကြည့်သောအခါ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ကတည်းက အာဒံအား သွေးဆောင်ဖြား ယောင်းခဲ့သော နည်းဗျူဟာ အဟောင်းကြီး ပင်ဖြစ် ကြောင်း သိရပါသည်။
၁။ ဘုရားသားဆိုတာ ပေးထားတဲ့ အခွင့်အာဏာကို အလွဲအသုံးချဘို့မဟုတ်။
သခင်ယေရှုခရစ်သည် ဘုရားသားအစစ် အမှန်ဖြစ်သလို ဘုရား စင်စစ်လည်းဖြစ်ပြီး လူ့ လောကသို့ လူ့ဇာတိကို ခံယူပြီးြ<ွကလာသော အရှင် သခင်ဖြစ်၍ တန်ခိုးတော် အနန္တလည်း ရှိပါသည်။ စာတန်က ထိုတန်ခိုးများကို အသုံးပြု၍ ကျောက်ခဲ များကို မုန့်ဖြစ်စေပြီး ဘုရား သားတော် မှန်ကြောင်း သက်သေ ပြခိုင်းပါသည်။ ဘုရား သားတော်မှန် သောကြောင့်၎င်း၊ မိမိ၌ရှိသော တန်ခိုးကို မိမိ ကိုယ်အား ပြစားရန် အလွဲ သုံးစား မပြုလို၍၎င်း စာတန်၏ လှည့်ဖြား သွေးဆောင်မှုကို သခင်ဘုရား အောင်မြင်ခဲ့သည်မှာ ကျမ်းစာကို နှလုံးသွင်းထား၍ ထိုနှုတ်ကပတ်တော် ထားဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။
လူသည် မုန့်အား ဖြင့်သာ အသက်မွေးရ သည်မဟုတ် သခင်ဘုရား မိန့်တော်မူသမျှ အားဖြင့် သာမွေးရမည်၊ ကျမ်းစာ လာသည်ဟု ပြန်၍မိန့် တော်မူ၏။(မဿဲ ၄း၎)။
၂။ ဘုရားသားဆိုတာ လူအထင်ကြီးလာအောင် ပြုမူဆောင်ရွက်ဘို့မဟုတ်။
စာတန်က ကျမ်းစာကို အသုံးပြုကာ ဗိမာန်တော် အထွဋ်မှ အောက်သို့ ခုန်ချလိုက်ပါက ကျမ်းစာ၌ (ဆာ ၉၁း၁၁-၁၂) ကတိ ရှိသည်အတိုင်း ကောင်းကင်တမန်များက သင့်ကို လက်ဖြင့် မစချီ ပင့် ထားမည်ဟု စုံစမ်း သွေးဆောင် ပြန်ပါသည်။ အချို့ အနက်ဖွင့်ကျမ်းများက သခင်ဘုရား ဤကဲ့သို့ ခုန်ချ လိုက်သော အခါ အောက်မှ ကောင်းကင် တမန်များက ချီပင့်ထားသည်ကို လူများ မြင်တွေ့ပါက သခင် ဘုရားအား အလွန်ပင် အထင်ကြီးပြီး ရိုသေ ရှိခိုးလာကြရန် စာတန်က ကလိမ်ညဏ် ဆင်သည် ဟု ဖေါ်ပြ ထားပါသည်။ တစ်နည်း ဆိုရသော် သမ္မာကျမ်းစာကို အသုံးချပြီး မိမိကိုယ်ကို လူအများအ ထင်ကြီး အောင် မိမိကို လူအများ ရိုသေရှိခိုးချင်လာ အောင် လုပ်သူ စာတန်၏ သွေးဆောင် ဖြားယောင်း မှုကို သခင်ဘုရားက
‘သင်၏ ဘုရားသခင်ကို သင် သည်အစုံအစမ်း မပြုရဟု ကျမ်းစာလာသည် ဟု မိန့်တော် မူ၏။ (မဿဲ ၄း၇)။
ဟု နှုတ်ကပတ်တော်ကို နှလုံးသွင်းကာ စာတန်ကို တုန့်ပြန်ခဲ့သည်ကို တွေ့နိုင်ပါသည်။ ယနေ့ နှုတ်ကပတ် တော်ကို အမှန်တကယ် ယုံကြည်သည်ထက် မိမိအတွက် စားပေါက်ချောင် လူအထင် ကြီးလာရန် ပြုလုပ်လိုသူများအတွက် သတိပြု ဆင်ခြင်စရာ ပင်ဖြစ်ပါသည်။
၃။ ဘုရားသားဆိုတာ စာတန်ကို ကိုးကွယ်ဘို့မဟုတ်။
နာက်ဆုံး စာတန်က သခင်ဘုရားအား အလွန် မြင့်လှသော တောင်ပေါ်သို့ ဆောင်သွားပြီး တစ်လောကလုံးကို မြင်စေကာ သူအား ညွတ်ပြပ် ကိုးကွယ်လျှင် တိုင်းနိုင်ငံများ၏ ဘုန်းကို ပေးမည် ဟု သွေးဆောင် ဖြားယောင်းခဲ့ပါသည်။ ဘုန်းရှိ လာသော လူများကို လူအများက ကိုးကွယ်လာ ကြပါ သည်။ တစ်နည်း ဆိုရသော် လူသားအချင်းချင်း၏ ကိုးကွယ်အားကိုးမှုကို လိုချင်၍ ဘုန်းတန် ခိုး ကြီးမားအောင် လုပ်ခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်များစွာကို သမိုင်း အဆက်ဆက် ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ဖူးကြပါလိမ့်မည်။ ထိုစုံစမ်းခြင်း ကိုလည်း သခင်ဘုရားက
‘အချင်းစာတန် ငါ့နောက်သို့ ဆုတ်လော့။ သင်၏ ဘုရားသခင် ကို ကိုးကွယ်ရမည်။ ထိုဘုရားသခင် ကိုသာ ဝတ်ပြုရမည် ကျမ်းစာလာသည်ဟု မိန့် တော်မူ၏။'(မ ၄း၁ဝ)။
သခင်ဘုရား ကဲ့သို့ စာတန်၏သွေး ဆောင်မှုများကို အောင်မြင်နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၌ နှုတ်ကပတ်တော် တည်းဟူသော ထားရှိနေပါပြီ။ ထိုထားကို ထက်အောင်သွေးကာ စာတန်၏ ပရိယာယ်နှင့် သွေးဆောင် ဖြားယောင်းမှုများ ကို အောင်မြင်ရန် ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေး မစ ပါစေ။
ငါတို့သည် လူဇာတိ၌ ကျင်လည်သော်လည်း ဇာတိပကတိ အလိုသို့လိုက်၍ စစ်တိုက်ကြ သည် မဟုတ်။ ငါတို့ စစ်တိုက်၍ သုံးစွဲသော လက်နက်သည် ဇာတိ ပကတိ လက်နက်မဟုတ်။ ဘုရား သခင်၏ တန်ခိုးတော် အားဖြင့် မြို့ရိုးမြို့ပြတို့ကို ဖြို ဖျက်နိုင်သော လက်နက်ဖြစ်၏။ ထိုလက်နက်အား ဖြင့် လူတို့၏ အကြံအစည် တိုကို၎င်း၊ ဘုရားသခင်ကို သိသော ပညာကို ဆီးတားသော မာန်မာန ရှိသမျှ တို့ကို ၎င်း၊ နှိမ့်ချ မှောက်လှန်၍ ခပ်သိမ်းသော စိတ်တို့ကို ဖမ်းချုပ်ထားလျက် ခရစ်တော်၏ စကား တော်ကို နားထောင်စေကြ၏(၂ကော ၁ဝး၃-၅)။
”ကျွန်တော် ဘယ်လောက်ပဲ ပင်ပန်းနွမ်း နယ်ပါလေစေ..သမ္မာကျမ်းစာကို မဖတ်ဘဲ အိပ် ခဲ့တဲ့ည တစ်ညမှ မရှိပါ..”(ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒေါက် ကလပ်မက်အာသာ)။
နှုတ်ကပတ်တော်ကို မထီမဲ့မြင် ပြုသောသူသည် ပျက်စီးလိမ့်မည်။ ပညတ် တရားတော် ကို ခန့် ညားသော သူမူကား ချမ်းသာ ရလိမ့်မည်။ (သုတ္တံ ၁၃း၁၃)။
၂၀၁၀ ခုနှစ် သြဂုတ်လထုပ် စိန်ခေါ်သံမဂ္ဂဇင်းမှ Rev. ဦးအောင်သက်သက်ညွှန့်၏ စာမူကို ပြန်လည်ကူယူ ဖော်ပြပါသည်။
← ကမ္ဘာကျော်ခဲ့သော “စိန့်ဖရန့်စစ်၏ ဆုတောင်း”
ခရစ်တော်အတွက်သာ မဟုတ်ခဲ့ရင် →